MERITA izita rekondinendi inozivikanwa nhasi se Africa - Afrikhepri Foundation
svondo, february 28, 2021
kugashira NHOROONDO YAKANAKA NOKUTANGA
MERITA izita rekondinendi inozivikanwa nhasi se Africa
Verenga: 2 min
Merita kana Tamert ndiro zita rechinyakare rekondinendi inozivikanwa nhasi se Africa. Ichiri kushandiswa nanhasi nemasangano etsika mukondinendi yose. Iyo yechinyakare Medu (hieroglyphics) yezwi iro kana rikashandurwa rinoreva Meri - Aimé uye Tah - Terrain (nyika yedu yatinoda).
Kemet yaive budiriro yepasirese yakachengetedza ivhu nevanhu vayo kweanopfuura makore zviuru zana zvisati zvavapo masystem emazuva ano ekoloni. Nhasi Kemet zvisirizvo senzvimbo yeNile Valley. Mutsika, Nile Valley ndiro guta guru reKemetic budiriro.
Kemetic budiriro yakapararira pasirese: kondinendi yeMerita, America, Australia nenharaunda dzeChina, India uye zvikamu zveEurope zvese zvakanzi Kemet nekuda kwekuvimbika kwavo ku budiriro yepakutanga.
The yepakati inosimudzira uye inochengetedza echinyakare Kemetic tsika uye inopa simba kuvanhu neruzivo rweyedu yakajairika inosanganisa yemuno midzi.
Zvinova zvakafanira kusabvisa izwi rekuti Africa iro parizvino rakapihwa kondinendi (inozivikanwawo sechivako chebudiriro).
Zviripachena pakuongorora nhoroondo yepasirese kuti vemakoloni vepasi rose vakakuita kukoshesa kudzikisira nyika yeAfrica munzira ipi neipi yavanogona. Muzvitendero zvese zvemazuva ano vanhu vemavara vane madhimoni. Mune chiKristu, ivo vanofungidzirwa kuve vana vemwanakomana mumwechete akatukwa waIsraeri, Hamu. MuIslam, vanonzi varanda. Kuenderera mberi kubvumidzwa kwedhimoni nekuuraya rudzi izvo nyika yekoloni yakatonga pamusoro peAfrica nevanhu venyika yakareba yemavara yemadzibaba ehurongwa uhwu yakapa kondinendi Merita zita rekuti Africa, rinova (hieroglyphics) izwi Medu iyo painodudzirwa inoreva Afri - kupisa Ka mweya (Nyika yeMweya Yemweya). Mukusunungurwa kwedu kubva kumufananidzo wenyika yedu, chivakwa chebudiriro, zvakakosha kuti titame kubva kunguva yeAfrica.
Africa Yekare: Kubva kuacacus kuenda kuZimbabwe. 20 BC-000th century
9 nyowani kubva ku € 49,00
8 yakashandiswa kubva ku45,00 €
Tenga € 49,00
Yakapedzisira kugadziridzwa munaFebruary 27, 2021 8:20 PM
Baba vakapfuma, baba varombo - Robert Kiyosaki (Audio)
Promosol, solar oveni "inogadzirwa mu" Chad
Ormus, iyo alchemical monoatomic goridhe yekumutsa uye kubatanidzwazve kune mamwe nyika
Kutanga uye kuziva kweMweya - René Guénon (PDF)
Nhoroondo Yese ye Africa - Vol 2